သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ထဲတွင်ဗတ္တိဇံတစ်စက္ကန့်ဖြစ်နားလည် ဗတ္တိဇံ 8: တမန်တော် 1 မှာယေရှု၏ပြောပြီ ", ပါဝါ" သို့မဟုတ် "မီးထဲမှာ":
"ဒါပေမယ့်ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောသငျသညျအပျေါကြွလာသောအခါသင်တို့သည်တန်ခိုးကို ခံရ. လိမ့်မည်နှငျ့သငျယေရုရှလင်မြို့၌ငါ၏သက်သေဖြစ်ရလိမ့်မည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ယုဒပြည်နှင့်ရှမာရိ၌၎င်း, မြေကြီးစွန်းမှ။ " (ထို)
အထူးသကပေါ်ယုံကြည်သူများ၏အတှေ့အကွုံကိုရည်ညွှန်းသည် ပင်တေကုတ္တေနေ့ ထဲမှာဖော်ပြထား တမန်တော်၏စာအုပ် ။
ဤသည်နေ့ရက်တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် သူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာငြိမ်ဝပ်စွာနေမီး၏တပည့်များနှင့်လျှာပေါ်သွန်းလောင်းခဲ့သည်:
ပင်တေကုတ္တေ၏နေ့ရောက်လာသောအခါ, သူတို့ကတစ်နေရာတည်းတွင်အတူတကွအားလုံးရှိကြ၏။ ရုတ်တရက်အကြမ်းဖက်လေတိုက်၏မှုတ်တူသောအသံကောင်းကင်ကရောက်လာသောထိုသူတို့ထိုင်ကြစဉ်ရှိရာမြေတပြင်လုံးအိမ်သူအိမ်သားနှင့်ပြည့်၏။ သူတို့ကကွဲကွာသူတို့တစ်ဦးချင်းစီ၌ငြိမ်ဝပ်ဆီသို့ရောက် လာ. , မီးလျှာဖြစ်သလိုပဲအဘယ်အရာကိုမြင်တော်မူ၏။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်နှင့်ပြည့်စုံများနှင့်အခြားအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောစပြုခဲ့ကြ ဝိညာဉ်တော်သည်သူတို့အ enabled အဖြစ်။ (တမန်တော် 2: 1-4, င်း)
အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုမှာဖြစ်ပေါ်သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏ indwelling ကနေကွဲပြားနှင့်သီးခြားအတွေ့အကြုံကိုကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကို ကယျတငျတျောမူသော ယောဟန် 7: 37-39; တမန်တော်ဝတ္ထု 2: 37-38; တမန်တော် 8: 15-16; တမန်တော် 10: 44-47 ။
ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံဆရာမဿဲ 11:11 အတွက် said: "ကျွန်မအားဖြင့်သင်တို့ကိုဗတ္တိဇံ နောင်တတရားဘို့ရေ။ ဒါပေမယ့်ငါ့နောက်ထိုသူ၏ခြေနင်းငါသယ်ဆောင်ရန်မထိုက်မတန်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်သောသူတဦးတည်းလာပါတယ်။
Pentecostal ထဲမှာသူများကဲ့သို့အခရစ်ယာန်တွေက ဘုရားသခင်၏စညျးဝေးပှဲ တန်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုတို့ကသက်သေဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည် ဘာသာစကားပြောခြင်း ။ ယုံကြည်သူတစ်ဦးသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်, ကနေကွဲပြားအတွေ့အကြုံကိုအတွက်ဗတ္တိဇံကိုသောအခါဝိညာဉျတျော၏လက်ဆောင်များကိုကငျြ့သုံးဖို့ပါဝါကိုသူတို့တောင်းဆို, အစပိုင်းတွင်လာ ပြောင်းလဲခြင်း နှင့် ရေဗတ္တိဇံ ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံတရားကိုယုံကြည်အခြားဂိုဏ်းဂဏပြည့်ဝငျကမျြးအသင်းတော်များ, ဘုရားသခင်၏ဘုရားကျောင်းများမှာ Pentecostal တညီတညှတျတညျးရှိခွငျး , အသင်းတော်များ ကရာနီ Chapel , Foursquare ဧဝံဂေလိအသင်းတော် နှင့်များစွာသောအခြားသူတွေ။
အဆိုပါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏လက်ဆောင်များကို ပထမရာစုယုံကြည်သူများတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောထဲမှာဗတ္တိဇံနှင့်အတူပါလာသော ( 1 ကောရိန်သု 12: 4-10; 1 ကောရိန်သု 12:28) ထိုသို့သောပညာ၏မက်ဆေ့ခ်ျကို၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုအဖြစ်ပုပ္ပနိမိတ်နှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ပါဝင်သည် အသိပညာ, ယုံကြည်ခြင်း, အနာရောဂါငြိမ်းစရာ, အံ့ဖွယ်အင်အားကြီး, ဝိညာဉျလျှာနဲ့လျှာ၏အနက်ဥာဏ်၏လက်ဆောင်များ။
ဤရွေ့ကားလက်ဆောင်တွေအဘို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ရဲ့လူမျိုးအားပေးရလနေကြတယ် "ဟုအဆိုပါဘုံကောင်းသော။ " 1 ကောရိန်သု 12:11 အလှူတော်ညျဘုရားသခငျ၏အဆိုအရပေးထားကြသည်ပြောပါတယ် အချုပ်အခြာအာဏာ ( "သူဆုံးဖြတ်သည်အဖြစ်") အလိုတော်။ ဧဖက် 4:12 ထိုအလက်ဆောင်တွေဝန်ဆောင်မှုနှင့်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်ခြင်းအတှကျဘုရားသခငျရဲ့လူပြင်ဆင်ထားရန်ပေးအပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏ဗတ္တိဇံတရား; သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အတွက်ဗတ္တိဇံ; သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏လက်ဆောင်ပေးမယ်။
တချို့က Pentecostal ဂိုဏ်းဂဏသွန်သင် ဘာသာစကားပြောခြင်း သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌နှစ်ခြင်းရဲ့ကနဦးသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့ထဲတွင်ဗတ္တိဇံခံယူဖို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာအကောင်းဆုံးဖော်ပြချက်များထဲမှအဘို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် , Desire ဘုရားသခငျသညျမှာတွေ့ရတဲ့ဆရာယောဟနျ Piper ကဒီသင်ကြားမှုထုတ်စစ်ဆေး: "သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏လက်ဆောင်ပေးမယ်လက်ခံလုပ်နည်း" ။
ပထမကမ္ဘာစစ်: အ Marne ဒုတိယတိုက်ပွဲ
ဒင်း Koontz စာအုပ်စာရင်း
Android အတွက်3Paranormal ဝိညာဉ်အမဲလိုက်ခြင်း Apps ကပ
7 ဂန္ထဝင်ဂျိန်း Fonda, Movies
သီရိ Chaitanya Mahaprabhu (1486-1534)
လူအားလုံးတို့သည် Leatherback ပင်လယ်လိပ်အကြောင်း
စတင်ရေးသား - က Short အရေးအသားတာဝန်တွေကို
ဘယ်အချိန်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ခွဲခြားမှုအဆုံးခဲ့သလား တစ်ဦးက Timeline ကို
လူအားလုံးတို့သည် Teapot ခုံးမြွေပူရာကင်းအကြောင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆယျ့နှစျဆန့်ကျင် suffragist အကြောင်းရင်းများ
အဆိုပါ Dash အတူ Hyphen ရှုပ်ထွေးမနေပါနဲ့
အဆိုပါ firs ခွဲခြားသတ်မှတ်
အကောင်းဆုံး Bible Commentary
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားတစ်ဦးက & T ကပြည်နယ်တက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး
( 'Cook ကမှ') မမှန်ပြင်သစ်ကြိယာ '' Cuire '' Conjugate လုပ်နည်း
နာမည်ကြီးအဆိုတော်များ: Giorgio Morandi
အရောင်ကုထုံးသို့မဟုတ် Chromotherapy ဆိုတာဘာလဲ
လူ Booker Prize ကိုကအရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်း